Latest Myanmar News - Page4of 237 - News & Media
February 22, 2021 by Latest Myanmar News
တနေကုန် ကြက်ပျံမကျ လူထောင်ပေါင်းများစွာတွေ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ နေရာများ… ယခုတော့ သူမဟုတ်တဲ့အလား ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် အမှိုက်တစတောင် မရှိတော့လောက်အောင် စည်းကမ်းကြီးလှပုံများ နိုင်ငံကြီးသားများကတောင် အတုယူရလောက်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးပါ။ သန်းထွန်းဇော် Zawgyi တေနကုန္ ၾကက္ပ်ံမက် လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေတြ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ ေနရာမ်ား… ယခုေတာ့ သူမဟုတ္တဲ့အလား ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ အမွိုက္တစေတာင္ မရွိေတာ့ေလာက္ေအာင္ စည္းကမ္းႀကီးလွပုံမ်ား နိုင္ငံႀကီးသားမ်ားကေတာင္ အတုယူရေလာက္တဲ့ ကမၻာေက်ာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဆႏၵျပပြဲႀကီးပါ။ သန္းထြန္းေဇာ္
အသက်ဘေးရန် အန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရန် ရွတ်ဖတ်ပွားကာ အဆောင်အဖြစ် ရွတ်ပွားဆောင်ထား နိုင်ကြပါစေ။ ဘေးကင်းပါစေ ရန်ကင်းပါစေ ကပ်ရောဂါအန္တရာယ်မှန်သမျှ ကင်းဝေးကြပါစေ။ အေးချမ်းသာယာ နိုင်ကြပါစေ။ အောင်မြင်ပါစေ ခရစ်ဒစ် Zawgyi အသက္ေဘးရန္ အႏၲရာယ္ကင္းေဝးေစရန္ ရြတ္ဖတ္ပြားကာ အေဆာင္အျဖစ္ ရြတ္ပြားေဆာင္ထား နိုင္ၾကပါေစ။ ေဘးကင္းပါေစ ရန္ကင္းပါေစ ကပ္ေရာဂါအႏၲရာယ္မွန္သမၽွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ေအးခ်မ္းသာယာ နိုင္ၾကပါေစ။ ေအာင္ျမင္ပါေစ ခရစ္ဒစ္
၀မ်းကိုက်ပျောက် သည့် စံပါယ်၉ ရွက်
စံပယ်(၉)ရွက်နှင့် ဝမ်းကိုက်ပြတ်ဆေး ” ဝမ်းကိုက်ရောဂါဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းများ ဝမ်းကိုက်ရောဂါသည် များသောအားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် မသန့်ရှင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို တတ်နိုင်သမျှ သန့်ရှင်းအောင် ထားရပါမည်။ မသန့်ရှင်းသောရေကို သောက်သုံးမိလျှင်လည်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် ရေကိုကျိုချက်ပြီးမှ သောက်သုံးသင့်ပါသည်။ မသန့်ရှင်းသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ချက်ပြုတ်စားသောက်မိလျှင်လည်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စင်ကြယ်အောင်ဆေးပြီးမှ ချက်ပြုတ် စားသောက်သင့်ပါသည်။ မသန့်ရှင်းသော အစားအစာများမှလည်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော အစားအစာများသာ စားသုံးသင့်ပါသည်။ တိရစ္ဆာန်မှ ရရှိသော နို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကြိုချက်ပြီးမှ သောက်သုံးသင့်ပါသည်။ တစ်ကိုယ်ရေ မသန့်ရှင်းမှုကြောင့်လဲ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ကိုစင်ကြယ်အောင် ဆေးခြင်း၊ ခြေသည်း လက်သည်းများ ညှပ်ခြင်းဖြင့် တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှု ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ဝမ်းကိုက်ရောဂါလက္ခဏများ ဝမ်းသွားရာတွင် … Read more
ကြက်သွန်နီတစ်လုံး ပုံမှန်စား ပေးခြင်းကြောင့် ရရှိနိုင်သည့် ကျန်းမာရေ းအကျိုးကျေးဇူးလေးများ
ကြက်သွန်နီ တစ်နေ့တစ်လုံ းပုံမှန်စားပေးခြင်း အ ကျိုးကျေးဇူး ကြက်သွန်နီကို ဟင်းလျာတွေချက်တဲ့ အခါ ဟင်းအနှစ်ရဖို့အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြက်သွန်နီအစိမ်း တစ်နေ့တစ်လုံး စားခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ၁။ပန်းနာရင်ကျပ် ကြက်သွန်နီထဲမှာ ဓာတ်မတည့်ရာမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရောဂါတွေကို ကုသပေးတဲ့ Quercetin ဆိုတဲ့ အာနိသင်ပါဝင်ပါတယ်။ ယင်း Quercetin ဟာ ဓာတ်မတည့်မှုတွေ၊ယောင်ယမ်းမှုတွေကို တားဆီးပေးတဲ့ ပန်းနာရင်ကြပ် ကိုလည်း ကုသနိုင်စွမ်းပါတယ်။ ထို့ပြင် Quercetin ကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ လေပြွန်တွေကို ကျယ်စေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ၂။ကင်ဆာ ကြက်သွန်နီဟာ နနွင်းနဲ့ရောလိုက်တာနဲ့ ကင်ဆာဖြေဆေးတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်။ အူလမ်းကြောင်းထဲရှိ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို လျော့ပါးသေးငယ်စေတဲ့အတွက်လည်း အူမကြီးကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်ကြက်သွန်နီရဲ့ နံရံမှာရှိနေတဲ့ အော်ဂဲနို ဆာလဖာ ဒြပ်ပေါင်းတွေဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေတိုက်ဖျက်ပေးလို့ တစ်နေ့တစ်လုံးပုံမှန်စားသင့်ပါတယ်။ ၃။ … Read more
February 21, 2021 by Latest Myanmar News
ဘဝအပေါ်သံဝေဂစိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်း ကိုယ့်ဘဝမှာ သောကဖြစ်စရာတွေကမျိုးစုံတယ်။ သောကဖြစ်လာလို့ မထိန်းနိုင်တဲ့အခါ ငိုခဲ့ရတဲ့အခါတွေကလည်းအများကြီး။ ကိုယ်ဆင်းရဲမှု စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာတွေလည်း ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဆိုတာလည်း များစွာကြံုတွေ့ရလို့ ဘဝခရီးဟာ လျှောက်လမ်းကြသူတိုင်း ဘယ်သူမှ မသက်သာဘူးလို့ ဒီလိုပြောရမှာ။ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ဘဝခရီးကို ဖြတ်သန်းကြရတဲ့အခါမှာသက်သာမှုရသလားဆိုတော့ ဘယ်သက်သာမှု ရမလဲ။ အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆို ဗိုက်​နာရတယ် ဒါထင်ရှားတာလေးတစ်ခု။ အရှင်မဟာ မောဂ္ဂလာန် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းရောဂါဝေဒနာတွေ ခံစားရတယ်။ နောက်ဆုံးကြတော့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ အခုခေတ်အနေ နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် ရိုးရိုး ပရိနိဗ္ဗာန်စံရတာ မဟုတ်ဘူး။ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လို့ ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားရတယ်လို့ ဒါ ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေပဲ။သာမန်အားဖြင့် မစဉ်းစားပဲနေလို့ရှိရင် ဘဝမှာအခက်အခဲ မရှိဘူး။ပျော်စရာကြီးလို့ မြင်ကောင်း မြင်လိမ့်မယ်။ ပျော်စရာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ် အခက်အခဲတစ်မျို်းမျိုးတော့ ကြံုတွေ့မှာပဲ သေချာပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ပဲဘဝခရီးကြီးကို လျှောက်လှမ်းတဲ့အခါမှာ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ကြံုတွေ့ရတယ်။ … Read more
ညီမလေးမုန့်လေးစားပါအုံး စာလေးပါထည့်ပေးထားတယ်ဗျ ဆိုလို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ
unity is the key ငါတို့တွေရဲ့စိတ်လေးတွေကဒီလိုလေးဟ “ညီမလေးမုန့်လေးစားပါအုံး စာလေးပါထည့်ပေးထားတယ်ဗျ” ဆိုပြီးပေးလာပါတယ်။ ကိုယ်ထင်လိုက်တာကတော့ motivation ဖြစ်စေမယ့်စာတိုလေးတစ်ခုခုရေးပြီး ပေးတယ်ပဲထင်လိုက်တာ။ တကယ်ဖွင့်ဖတ်မိတော့ မျက်ရည်ပါကျရတယ်။ ညနေဘက်ပြန်တဲ့သူတွေ အပြန်လမ်းစားရိတ်ပျက်သွားမှာစိုးလို့နဲ့တူပါတယ်။ လှူတဲ့ အလှူရှင်တွေရဲ့စိတ်ထားလေးတွေ မြင့်မြတ်လိုက်တာ…. ဒီလိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ နောက်နေ့တွေအတွက် တကယ်အင်အားလည်းဖြစ်ရတယ်။ သာဓုပါရှင် လှူတဲ့အလှူရှင်တွေကို…🙏🏻 Zawgyi unity is the key ငါတို႔ေတြရဲ႕စိတ္ေလးေတြကဒီလိုေလးဟ “ညီမေလးမုန္႔ေလးစားပါအုံး စာေလးပါထည့္ေပးထားတယ္ဗ်” ဆိုၿပီးေပးလာပါတယ္။ ကိုယ္ထင္လိုက္တာကေတာ့ motivation ျဖစ္ေစမယ့္စာတိုေလးတစ္ခုခုေရးၿပီး ေပးတယ္ပဲထင္လိုက္တာ။ တကယ္ဖြင့္ဖတ္မိေတာ့ မ်က္ရည္ပါက်ရတယ္။ ညေနဘက္ျပန္တဲ့သူေတြ အျပန္လမ္းစားရိတ္ပ်က္သြားမွာစိုးလို႔နဲ႔တူပါတယ္။ လႉတဲ့ အလႉရွင္ေတြရဲ႕စိတ္ထားေလးေတြ ျမင့္ျမတ္လိုက္တာ…. ဒီလိုတတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးတာ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ေန႔ေတြအတြက္ တကယ္အင္အားလည္းျဖစ္ရတယ္။ သာဓုပါရွင္ လႉတဲ့အလႉရွင္ေတြကို…🙏🏻
Categories သတင္းမ်ား Tags ါတို့တွေရဲ့စိတ်လေ Leaveacomment
အန္တရာယ်ရှိ နိုင်သော အစားအသောက် အမျိုးအစား (၂၁) မျိုး
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အန္တရာယ်ရှိ နိုင်သော အစားအသောက် အမျိုးအစား (၂၁) မျိုးကို သတိပြုရန်လိုဟု F D A က သတိပေး မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ဓာတုပစ္စည်းအများဆုံးတွေ့ရပြီး အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော အစားအသောက် အမျိုးအစား (၂၁) မျိုးခန့်ရှိပြီး၊ အများပြည်သူများ အနေဖြင့်လည်း သတိပြုမိရန် လိုအပ်ကြောင်း အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (F D A)မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဇန်နဝါရီလလယ်က သတိပေးပြောကြားပေးထားသည်။ FDA ၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော အစားအသောက်များမှာ မုန့်ဖတ်၊ ပဲပြား၊ ပဲသွေး၊ ငရုတ်သီး၊ အရောင်တင်မှုန့်၊ ငရုတ်ဆီ၊ မြေပဲဆီ၊ ပြန်ကြော်ဆီ၊ မျှစ်၊ ပုန်းရည်ကြီး၊ အချိုရည် အမျိုးမျိုး၊ ငါးပိ၊ လက်ဖက်၊ ချင်း၊ … Read more
ငှက်ပျောသီး ၃ လုံးစားပေးရင် ဘာတွေ ကောင်းသလဲ
February 21, 2021 February 21, 2021 by Latest Myanmar News
ဒီနေ့က စပြီး စားတော့ မယ်။ မကြိုက်လည်းစား ကြိုက်လည်းစားပဲ တစ်ရက်ကို ငှက်ပျော သီး (၃)လုံး စားပေးခြင်းဖြင့် ရရှိမည့် အကျိူးကျေးဇူးများမှာ (၁) အသက် ၄၀ကျော်လာသည် နှင့် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ လျော့လာပြီး အရိုးအဆစ် နာကျင်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက် နေ့ ည ငှက်ပျော် သီးမှည့် (၃) လုံး စားပေးလိုက်ပါ ။ (၂) အစာအိမ် ကင်ဆာသမားများနှင့် အရိုး ကင်ဆာ သမားများ ငှက်ပျောသီး စားပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါကို မြန်မြန် သက်သာစေပါလိမ့်မယ် ။ (၃) စိ တ်ဖိစီးပြီး စိတ်ညစ်မှု ဝေဒနာဖြစ်လျှင် ငှက်ပျော် သီးမှည့် စားပေးပါ ။ (၄) ကျောက်ကပ် အားနည်း … Read more
Categories က်န္းမာေရးသုတ Tags ခါးနာ Leaveacomment
သံပုရာ ဆေးဖက်ဝင်အောင် ဖျော်နည်းလေး
သံပုရာ ရည်ကို ဆေးဖက်ဝင်အောင် ဖျော်နည်း သံပုရာသီးဟာ မြန်မာတို့ အတွက် ဆေးဖက်ဝင်လှပါတယ်။ သံပုရာသီးကို နေရာမရွေး ရနိုင်တဲ့ အသီးဖြစ်ပြီး ဒေသတိုင်းမှာတော့ အသုံးပြုပုံ ကွာသွားပေမယ့် ဆေးဖက်ဝင် အသီးအဖြစ် လူသိများလှပါတယ်။ သံပုရာသီးမှာ ဗီတာမင်အပြင် ဗီတာမင်အေ၊ ရက်တီနော်၊ ကယ်ရိုတင်း၊ ဘီတာခရစ် ပတိုဇန်သင်း၊ လူတင်၊ ဇီဇန်သင်း၊ ဖောလိတ်၊ ကိုလင်းစတဲ့ ဓာတ်တွေနဲ့ ကယ်လ်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဖော့စ်ဖရပ်စ်၊ ပိုတက်စီယမ်နဲ့ ဆိုဒီယမ်တို့လို သတ္တုဓာတ် တွေလည်း ပါဝင်ကြပါတယ်။ သံပုရာသီးကို အရည်ညှစ်ပြီး သောက်လေ့ ရှိတဲ့ လူတွေ အတွက် ဆေးဖက်ဝင်အောင် ဖျော်နည်းလေးကို မျှဝေချင်ပါတယ်။ ရှေးဦးစွာ သံပုရာသီးတွေကို အရည်ညှစ်ပြီး ၁၀ကျပ်သား ချိန်ထားပါ။ အိမ်သုံးသကြားနှစ်ကျပ်သား၊ရေသန့် ၀.၅ လီတာ … Read more